Ukuvuyela kukaRappa yiSuarhill Gang - Okunye
Le yayiyingoma yokuqala ye-rap yokungena kwi-US Hot 100. Umculo weRap wawukho kangangesithuba seminyaka esixhenxe, kodwa wawudla ngokuviwa kumabala eebhloko nakwiidisco apho ooDJ babedla ngokubhabha ii-breakbeats kunye nee-MCs zongeza amazwi aphilayo. Ngaphandle kweBronx, i-rap yayijongwa njengefad, kwaye iinkampani ezirekhodayo zazingenamdla wokuyixhasa ngezimali. Ingoma yokuqala ye-rap ekhutshwe ngentengiso yayingu-'Kim Tim III (Ubuntu Jock) 'yiFatback Band, eyaphuma ngehlobo lowe-1979, kodwa yathotywa yaya kwicala le-B lomculo weR & B wesiko.
'Ukuvuyela kukaRapper,' ekhutshwe ngoSeptemba 16, 1979, yayisisenzo esibi sokufumana irekhodi le-rap kwindawo ephambili, kwaye yayisebenza. Ingoma yafikelela kwi-Hot 100 (kwi # 84) kwitshathi yomhla kaNovemba 10, kwaye yaqhekeza i-Top 40 (kwi # 37) ngoJanuwari 5, ihamba nge # 36 ngeveki kamva. Ezi zikhundla zetshathi zinokubonakala zithobekile, kodwa ukufumana ingoma yengoma ye-rap ingqalelo enkulu yayiyimpumelelo, okwenza 'uRapper's Delight' ingoma yomculo kwimbali ye-hip-hop. Ifomula ephumeleleyo yayingamazwi aqhayisayo ngaphezulu kwesingqi esenziwe isampulu- ubuchule obaya buxhaphaka kwi-rap.
Ibhendi yeFatback yasebenzisa ukubetha kwasekuqaleni kwingoma yabo ethi 'Kim Tim III,' benza 'u-Rapper's Delight' ingoma yokuqala ye-rap yokusebenzisa isampulu, leyo yona yenziwa ngaphandle kwemvume kuba akukho ndlela yakudala isulwayo. Ukubetha okudlalayo kuyo yonke indawo kwathathwa kwi-'Good Times 'nguChic, ingoma eyayikwiikreyiti zika-DJ ngamnye owayedlala kumatheko ebhloko apho i-rap yaqala khona. I-groove ye-'Good Times 'yayilula ukuyiphungula, isenza ikhefu elilungele ii-MCs. ISugarhill Gang yayingengowokuqala ukuyiboleka-uKumkanikazi wasebenzisa ibassline kwingoma yabo ' Okunye ukuluma nothuli . '
'Ukuvuya kukaRapper' khange kusampule nje ukubetha; imitya yomtya nayo yaphakanyiswa, ke yonke ingoma 'Yolonwabo' yenziwe ngamacwecwe engoma yeChic.
'Amaxesha Amnandi' yabhalwa sisigingci / umvelisi kaChic uNile Rodgers kunye nomdlali weBass uBernard Edwards. URodgers weva u-'Rapper's Delight 'okokuqala xa wayephumile kwiklabhu kwaye u-DJ wayidlala. Emva kokuba esongele ityala, iikhredithi kwingoma zatshintshwa. Ekuqaleni, uSylvia Robinson kunye nabarekhodi abathathu babebhalwe njengababhali bengoma, kodwa ngoku ekuphela kwabaqambi abadwelisiweyo nguRodgers noEdward, abafumana yonke imirhumo yokubhalwa kwengoma engenayo (isabelo sikaEdward siya kwilifa lakhe, njengoko wasweleka ngo1996) .
Eli qela lahlanganiswa nguSylvia Robinson, umnini welebheli yaseNew Jersey iSugarhill Records, ukuze asebenzise umculo we-rap owawufumana ukuthandwa kwiqela laseNew York. Unyana wakhe, uJoey Robinson, owayeneminyaka eli-18 kuphela ubudala ngelo xesha, wayengusekela-mongameli wonyuselo lwelebheli kwaye wafumana aba rappers beqela: Wonder Mike (Michael Wright), Big Bank Hank (Henry Jackson) no Master Gee ( UGuy O'Brien), bonke basuka e-Englewood, eNew Jersey. Akukho namnye kubo owayenokuthenjwa okukhulu, kwaye babengeyonxalenye 'yabasebenzi' ababedlwengula kwaye bedanisa kwimibutho yeebhloko. Amanye amalungu omdlalo wokuqala we-hip-hop acinga ukuba eli qela laliyimbumbulu, kodwa le ngoma yaduma kakhulu kwiiklabhu kwaye yaba nefuthe elikhulu.
URobinson, usomashishini onobuqili osweleke ngo-2011 eneminyaka engama-75, ikwangula Sylvia wabethwa ngo-1973 'ngePillow Talk,' kwaye wayesiqingatha sikaMickey noSylvia, ababethwa ngo'1956 'Uthando Luyamangalisa.' Ufumanise umculo we-rap kuba abantwana bakhe bayawuthanda, kwaye wasebenzisa ishishini lakhe ngamava kunye namava oshishino ukwenza i-hit yokuqala phakathi.
Unokufumana imixube emininzi eyahlukeneyo ka 'Rapper's Delight,' kodwa eyokuqala eyi-12 'engatshatanga yaqhubeka-kwaye-kwaye-kwaye-nangoku-on-on-on-on imizuzu eli-14 kunye nemizuzwana engama-27 (nangona ileyibheli kwelinye ithe bekuyimizuzu eyi-15). Ukuhlelwa koonomathotholo kuqhuba i-4: 55, isusa ukuqhayisa okuninzi, ezinye zeSuperman kunye namabali okutya amabi, kunye neendinyana zezikweko ezingasombululwanga ('NjengoPerry Mason ngaphandle kwetyala, njengoFarrah Fawcett ngaphandle kobuso bakhe').
'IBhanki Enkulu' uHank Jackson, omnye wabavakalisi abathathu kwiqela, weba indawo yeSuperman kuMC Grandmaster Caz, umlobi owayeyinxalenye yeqela elibizwa ngokuba yiCold Crush. UHank wasebenza njengomphathi kwiCold Crush kwaye wayelilungu leklabhu apho babedlala khona. Usebenzise i-rap ukungena kwiqela, kwaye wade wasebenzisa indawo apho uCaz wayepela igama lakhe lesidlaliso- 'uCasanova,' esiya kuthi ga ngoku isingqisho esithi 'Ngu-Grandmaster onee-MCs ezintathu' (ISugarhill Gang inamalungu amathathu nje. , iCold Crush ibine). UCaz uziva engazange anikwe ngetyala elifanelekileyo, kwaye ngo-2000 wakhupha ingoma ebizwa ngokuba yi-'MC Delight 'apho wayethetha khona ngalo mbandela, esithi:' ikati eyaluma le ngoma yayingumphathi wam, ungcikivo olucocekileyo ndiza kukuxelela ukuba kutheni .. . '
Kwimicimbi yeCaz, uHank wambiza emva kokuba efumene igig neSugarhill Gang, ecela i-rap awayenokuyisebenzisa neqela. UCaz wayinika yena, kodwa wayelindele ukuba abuyiselwe ngetyala, elingazange lifike. Kananjalo neeroyalty, njengoko uCaz engazange amangalele.
Kwakukho ividiyo eyenzelwe le ngoma, yiyo loo nto yenza ukuba ibe ngumculo wokuqala wevidiyo yomculo. Yayiyividiyo yokusebenza kunye neemvumi ezazenza ingoma kwi-disco ngelixa isihlwele sidanisa. Yayiluhlahlo-lwabiwo mali oluphantsi, kodwa ngobuchule lwenziwa ngexabiso elifanelekileyo lemveliso (iswitshi isula!).
Idisco yayibizwa ngokuba yiSoap Factory. Ifumaneka ePalisades Park, eNew Jersey, yabamba uthotho lweTV olwaludibeneyo olwalubizwa ngokuba yi Umboniso weDisco weDisco Show ukusuka ngo-1977-1979. Ngo-1979, i-Sugarhill Gang yenza le ngoma kumdlalo, kwaye loo ntsebenzo yaba yividiyo ye-facto.
USylvia Robinson kwiiRekhodi zeSugar Hill wayengumqambi kulo mbandela, njengoko wayeqonda ukuba iividiyo zaziyindlela elungileyo yokunyusa ingoma eYurophu, kwaye wabathuma ukuba babenikwe amagcisa akhe (uGrandmaster Flash kunye noFurious Five bafumana enye ' Umyalezo '). Njengokuba iMelika ibanjiwe iividiyo zomculo, ikliphu yafumana ukuboniswa okuninzi eNew York ibonisa IBhokisi yoMculo weVidiyo ezazibonisa iividiyo zerap. I-MTV, eyasungulwa ngo-1981, ayizange idlale ividiyo ye-rap kude kube ngo-1984, xa babedlala i-'Rock Box 'ye-Run-DMC, kodwa xa baqala Mna! Ukudlwengulwa kweMtv Ngo-1988, 'u-Rapper's Delight' wafumana ezinye ijikelezisa.
Le ngoma yavula izikhukhula kwiirekhodi ezininzi ze-rap. Uninzi lwezi zinto zikhutshiweyo zazikwilebhile yeSugarhill, eyayisekhaya likaGrandmaster Flash kunye neFurious Five, iSpoonie Gee, kunye neqela labasetyhini elibizwa ngokuba kukulandelelana. NgoDisemba 1979, uKurtis Blow waba ngumrepha wokuqala ukukhupha enye kwileyibhile enkulu xa wakhupha i-'Krisimesi Rappin ', kwaye ngo-1980 waba nengxelo yokuqala yegolide ye-rap ethi' The Breaks. ' UBlondie waba sisenzo sokuqala esimhlophe sokutshata ne-rap xa babetha # 1 ngo'Xwilo 'kwakhona ngo-1980.
Uninzi lweerekhodi ze-rap ngelo xesha zaziphuma kwiilebheli ezincinci, ezizimeleyo ezinjengeNkampani kaHarlem kaBobby Robinson Yonwabela. Kuthathe iminyaka embalwa ngaphambi kokuba iilebheli ezinkulu zisayine inani elikhulu labarepha, nangona ngo-1982, iTommy Boy Records yaphumelela kwi-'Planethi yeAfrika 'yaseAfrika Bambaataa.
Le yayiyeyona nto ibalulekileyo e-UK, eyayilinyathelo eliphambili eMelika xa kufikwa kulwamkelo lomculo we-rap. ENgilani, apho kukho abantu abaninzi baseJamaican, umculo we-rap wawungekho kude kakhulu kumculo we-reggae obonisa 'ii-toasters' ezongeza amazwi ngexesha lekhefu kumculo. U-Kurtis Blow's 'Christmas Rappin' 'wenza i-UK Top 40 ngenyanga enye no' Rapper's Delight ': Disemba 1979. Isenzo sasekhaya esasine rap yase UK e Wham!, Eya ku # 8 ngo' Wham Rap! (Yonwabela into oyenzayo?) 'Ngo-1983. Kulowo, uGeorge Michael utshica imigca efana nale:
Hee wonke umntu makandijonge
Ekuqaleni, oku akuzange kukhutshwe kwi-albhamu, kuphela njenge-12 'engatshatanga, kuba iirekhodi zeSugarhill zazingacingi ukuba i-albhamu yomculo we-rap iyakuthengisa. Oko kwavela kwiialbham zokuhlanganisa ezininzi.
Iqela leSugarhill lenze olunye utyelelo kwi-Hot 100; okokuqala xa 'u-8 Wonder' wayetshathiwe ku # 82 ngo-1981, emva koko ngo-'Apache 'kwi # 53 ngo-1982. Baye baphelela ekubeni mnyama, kodwa babuya kwiminyaka yoo-90 ukuza kudlala imiboniso. Ngo-1999 bakhupha i-albhamu yabantwana ebizwa ngokuba yi-rap Tsiba kuyo .
Ngo-1998, iSugarhill Gang yenza le nto kwiqela le-Turner Broadcasting. U-Turner wasebenzisa intsebenzo kwintengiso ye-The Goodwill Games, kodwa wayengenayo imvume yeqela kwaye wayalelwa ukuba ahlawule iqela phantse i-3 yezigidi zeedola ngo-2001.
Umgca we-bass kule ngoma wadlalwa bukhoma ngumntu oneminyaka eli-17 ubudala ogama linguChip Shearin, owafumana igig yeseshoni kuba umhlobo wakhe wayesazi umnini studio, uSylvia Robinson. UShearin wahlawulwa i-70 yeedola ukuphinda enze i-bass line evela kwingoma ethi 'Amaxesha Amnandi' kangangemizuzu eli-15. Urekhode inxenye kunye negubu elibukhoma, elenza isingqisho somculo wengoma. Xa ebuza uRobinson ukuba uza kuyisebenzisela ntoni, uphendule wathi: '' Ndinaba bantwana bazakuthetha ngokukhawuleza. '
USheerin wagqibela ngokudlala iigigs kunye neqela kwaye waba ngumculi we studio ophumeleleyo kunye nomqambi weejingles.
Oku kwagutyungelwa liqela le Def Def (Redman, Keith Murray, Erick Intshumayelo ye EPMD) ngo 1998 kwi Umntwana i-albhamu eyakhutshwa kwi-Def Jam. Yayibizwa ngokuba 'yiDef Squad Delite,' kwaye ezi ndinyana zazitshintshiwe. Kwavela kwindibaniselwano KuTha Ukuqala ... Kwakukho iRap (1997 Priority), apho amagcisa ehip hop ahlukeneyo agubungela iihip hop ezindala.
UBenjamin -Berlin, eJamani
I-2002 hit 'The Ketchup Song' (eyaziwa ngeSpanish njenge 'Asereje'), imalunga nomfana oyithandayo le ngoma kodwa angawaqondi amazwi ayo, ke uzenzela eyakhe. Into ayenzayo iguqulela kwiingoma zeNgoma yeKetchup.
Le ngoma isetyenziswe kwiinkqubo ezahlukeneyo zeTV, kubandakanya Nduli yoMthi , UMartin , Ukukhuhla , Ukukhuthaza kwaye Phakathi . Ukusetyenziswa kwayo kweyona movie idumileyo kwakukwi-movie ka-Adam Adam Sandler ka-1998 Umculi womtshato , apho kuculwa ngumdlali weqonga osele ekhulile uEllen Dow, edlala ukuya kwindawo yokuhlekisa yexhegokazi elidlwengulayo. Ezinye iifilimu zokusebenzisa ingoma zibandakanya Kangaroo Jack kwaye CB4 .
U-Kid Rock wenza isampulu yoku ngo-1998, 'Bawitdaba.'
Ngo-2001, oku kwasetyenziswa kwintengiso zamanzi eDasani.
rem kukuphela kwehlabathi lyrics
Inyama yenyama ndiza kwenza nantoni na ngothando
I-717 inombolo yengelosi enentsingiselo
ungacingi kabini ukuba kulungile bob dylan amazwi womculo